Ntoboa a Yɛyi De Boa Adwuma a Yehowa Adansefo Reyɛ wɔ Wiase Nyinaa | Adesua
YEHOWA yɛ Onyankopɔn a ne yam ye. (Yakobo 1:17) Yɛhu n’ayamye wɔ nneɛma a wabɔ nyinaa mu. Ɔde nsoromma hyɛɛ wim mã, na ɔde nnua ne nhwiren a ɛyɛ fɛ nso hyɛɛ asase so mã.—Dwom 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4.
Dwom 104 kyerɛwfo no kyerɛɛ nneɛma a Yehowa abɔ nyinaa ho anisɔ kɛse, enti ɔhyehyɛɛ dwom de yii no ayɛ. Sɛ wokenkan saa dwom no a, wokyerɛ anisɔ te sɛ odwontofo no? Ɔkaa sɛ: “Mɛto dwom ama Yehowa me nkwa nna nyinaa; meda so te aseɛ yi, mɛto dwom ama me Nyankopɔn.” (Dwom 104:33) Wo nso wopɛ sɛ woyɛ saa?
AYAMYE A ƐSEN BIARA
Yehowa pɛ sɛ yɛsuasua n’ayamye. Ɔma yɛhu nea enti a ɛsɛ sɛ yɛda ayamye adi. Ɔmaa ɔsomafo Paulo kyerɛwee sɛ: “Kasa kyerɛ wɔn a wɔyɛ adefoɔ wɔ wiase yi mu sɛ wɔnnnwene akokurokosɛm, nso wɔmmfa wɔn ani nnto ahonyadeɛ a ɛnni nnyinasoɔ so, na mmom wɔmfa nto Onyankopɔn a ɔma yɛn adeɛ nyinaa ma no bu soɔ ma yɛn ani gyeɛ no so; wɔnyɛ papa, wɔnyɛ adefoɔ nnwuma pa mu, wɔmmue wɔn nsam, na wɔnkyɛ adeɛ, na wɔnto fapem pa nsie yie mma daakye, na ama wɔatumi asɔ nkwa paa no mu dendeenden.”—1 Timoteo 6:17-19.
Bere a ɔsomafo Paulo kyerɛw ne krataa a ɛto so mmienu kɔmaa Korintofoɔ no, ɔkyerɛɛ adwene a ɛsɛ sɛ yɛnya bere a yɛreyɛ adɔe no. Ɔkaa sɛ: “Obiara nyɛ no sɛdeɛ wasusu no n’akomam, ɛnyɛ amemenemfe anaa ɔhyɛ so, ɛfiri sɛ Onyankopɔn dɔ deɛ ɔte n’anim ma.” (2 Korintofoɔ 9:7) Sɛ yɛn yam ye a, henanom na wɔnya so mfaso? Paulo kaa sɛ sɛ yɛma afoforo nya nea wɔhia a, na yɛreboa wɔn. Nanso yɛn nso yɛnya so mfaso efisɛ Yehowa bɛhyira yɛn.—2 Korintofoɔ 9:11-14.
Afei ɔsomafo Paulo twee adwene sii ayamye a ɛsen biara a Onyankopɔn ada no adi so. Ɔkaa sɛ: “Aseda nka Onyankopɔn wɔ n’akyɛdeɛ a ɛnni kabea no ho.” (2 Korintofoɔ 9:15) Nneɛma pa a Yehowa nam Yesu Kristo so de ma yɛn nyinaa ka “n’akyɛdeɛ a ɛnni kabea” no ho. Sɛ yɛreka akyɛde a ɛsom bo yi ho asɛm a, anka yɛn anom nsɛm bɛsa.
Yɛbɛyɛ dɛn akyerɛ sɛ yɛn ani sɔ nea Yehowa ne Yesu ayɛ ama yɛn nyinaa, ne nea wɔbɛyɛ ama yɛn daakye? Ɔkwan baako a yɛbɛfa so akyerɛ anisɔ ne sɛ yɛbɛda ayamye adi. Wei hwehwɛ sɛ yɛde yɛn bere, yɛn ahoɔden, ne yɛn ahode som Yehowa na yɛboa afoforo ma wɔsua ne ho ade. Sɛ yɛwɔ bi oo, sɛ yɛnni bi oo, yɛbɛtumi ayɛ saa.—1 Berɛsosɛm 22:14; 29:3-5; Luka 21:1-4.
Sɛnea na ɛte wɔ ɔsomafo Paulo bere so no, ɛnnɛ nnipa pii yi sika bi ‘sie’ anaa wotwa sika bi to hɔ de gu ntoboa nnaka a wɔakyerɛw ho “Wiase Nyinaa Adwuma” no mu.—1 Korintofoɔ 16:2.
Ɔsram biara, asafo ahorow de sika yi kɔ Yehowa Adansefo dwumadibea a ɛhwɛ wɔn man dwumadi so. W’ankasa nso betumi de ntoboa no akɔ Watch Tower Bible and Tract Society of Ghana, Attention Accounts Department, P. O. Box GP 760, Accra, Ghana. Wopɛ nso a wubetumi de akɔ sikakorabea a edidi so yi: Watch Tower, Barclays Bank, Accra High Street Branch, Account number 048/2746365 anaa Watch Tower, Ghana Commercial Bank, Accra High Street Branch, Account number 1011130008990. Anaasɛ wubetumi de akɔ Yehowa Adansefo dwumadibea a ɛwɔ wo man mu.
Wubetumi de ntoboa a edidi so yi nso akɔ Yehowa Adansefo dwumadibea a ɛwɔ wo man mu.
Sɛ obi pɛ sɛ ɔde check mena address a ɛwɔ atifi hɔ no a, ɛsɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wontua mma “Watch Tower.”
Sika a wɔde yi ntoboa akyi no, akwan foforo wɔ hɔ a wubetumi afa so ayi ntoboa de aboa Ahenni adwuma a wɔyɛ wɔ wiase nyinaa no. Ebi na edidi so yi: